Acer Aspire3A315 Black (i3-10th Gen) ~ ICT.com.mm
HomeAcer Aspire3A315 Black (i3-10th Gen)
Acer Aspire3A315 Black (i3-10th Gen)
K928,000 K900,000SAVE K28,000
Intel® CoreTM i3-1005G1 Processor ( 4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz ) Intel ® UHD Graphics4GB DDR4 Memory 1TB HDD Can be upgrade two slot DDR4 2400/M.2 SATA 15.6”... [Learn more]
Brand: AcerFilter by: Click & Collect, USD, Warehouse, Windows Laptops
Intel® CoreTM i3-1005G1 Processor
( 4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz )
Intel ® UHD Graphics
Can be upgrade two slot DDR4 2400/M.2 SATA
15.6” FHD Acer ComfyView LCD
USB 2.0, 3.0, HDMI, Card Reader,GBLAN
WLAN 802.11ac + Bluetooth
36Wh Li-Polymer battery
Acer အမှတ်တံဆိပ် Aspire3A315 ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ ရုံးသုံး Laptop တစ်လုံးကိုဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ ရရှိအောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 15.6” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ အသုံးပြုချင်သူတွေအကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ Full HD resolution ရရှိတဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်လှပမှာဖြစ်ပြီး Full Size ကီးဘုတ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ပိုမိုတွင်ကျယ်စေမှာပါ။ System ပိုင်းမှာ i3 နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ i3-10 th Gen Processor ကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကောင်းမွန်ပြီး အခြေခံရုံးသုံး Software တွေဖြစ်တဲ့ Microsoft Office ဆောဖ့်ဝဲတွေတင်သာမက အခြားလုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးသုံး Software တွေကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ RAM 4GB ကလုံလောက်မှုရှိပါတယ်။ Storage ပိုင်းအတွက် 1TB HDD ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့်ဒေတာအများအပြားကို သိမ်းဆည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Slot အလွတ်နှစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး DDR4 2400/M.2 SATA တို့ဖြင့် Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်အတွက် Intel ® UHD Graphics ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ဘတ္ထရီအတွက်ကိုတော့ 36Wh Li-Polymer battery ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ OS မပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ Windows ဗားရှင်းနဲ့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ ရိုးရှင်းလှပတဲ့ အနက်ရောင် ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး လှပတဲ့ ရုပ်ထွက်၊ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ i3-10 th Gen ရုံးသုံး Laptop ကောင်း တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Smoothly and quickly watch videos, surf the web, or get some work done with the an 8th Gen Intel® Core™ i7 processor1 and NVIDIA® GeForce® MX230 graphics1. Apps load faster, graphics perform better, and multitasking is more efficient with this powerful combination and up to 16GB of DDR4 memory.
Enjoy solid, reliable performance paired with amazing data stability and durability with two slots for up to 512GB PCIe SSD1. Easily store and share your important projects and data with 2TB1 of hard drive space.